UGilbert & Co. - I-Airbnb
UGilbert & Co.
Le ndawo inamagumbi okulala ama-3, iibhafu ezi-2 ezinempahla yokuhlamba, ikhitshi, igumbi lokutyela kunye negumbi lokuhlala.
Amagumbi okulala kunye negumbi lokuhlambela zibekwe phezulu. Ikhitshi kunye negumbi lokutyela kumgangatho omkhulu. Sifumaneka kwiihektare ezili-9 ngaphakathi nje komda wesixeko saseCedar Falls. Umgama nje oyi-1 1/2 yeemayile ngasentshona kwiYunivesithi yaseNorthern Iowa Campus. Sifumaneka imizuzu eli-10 ukusuka ezivenkileni, kwiindawo zokutyela, kunye nokunye!
Kukho amagumbi okulala ama-3 ahlukeneyo aphezulu, ngalinye libandakanya iibhedi ezimbini ezingamawele kunye nekhabhathi. Igumbi lokuhlala linebhedi yosuku kunye ne-trundle, i-recliner, i-cable TV kunye ne-DVD player. Umgangatho ophezulu unebalcony ephezulu ejonge kwipropathi. Omabini amagumbi okuhlambela abekwe phezulu. Enye ibandakanya ibhafu/ishawari, indlu yangasese kunye nesinki. Eyesibini ibandakanya ishawari yokuma, indlu yangasese, isinki, kunye newasher/idryer. Kumgangatho osezantsi, kukho ikhitshi enefenitshala epheleleyo kunye netafile yegumbi lokutyela.
Sijikelezwe zii-acreages ngoko kukho ubumfihlo obuninzi.
Ndifumaneka ngefowuni, itekisi okanye i-imeyile. Ndihlala kwindlu edityaniswe nendlu ka-Airbnb.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cedar Falls